Oromoon osoo humna Agaaziin ajjeefamuu fi taankiin irratti bobbaafamu qabsoo isaa asiin gayuu Woyyaaneen hubachuu qabdi - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Oromoon osoo humna Agaaziin ajjeefamuu fi taankiin irratti bobbaafamu qabsoo isaa asiin...
Oromoon osoo humna Agaaziin ajjeefamuu fi taankiin irratti bobbaafamu qabsoo isaa asiin gayuu Woyyaaneen hubachuu qabdi
Dhaadannoon HD Oromoo ajjeesuudha. Ajjeesuun, adamsuu fi taankii ummatatti bobbaasuun waanuma baatii 4n darban keessa turre. Wanti haarofni kana booda dhufu tokko hin jiraatu, dhiiroo!
”መንግስት የህዝቡን ሠላም በሚያደፈርሱና ሃብታና ንብረት ለማውደም በሚንቀሳቀሱ የጥፋት ሃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድ ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሣለኝ ገለጹ፡፡” Haylamaarami Dassaaleny, isa sa’aa kanatti manni irratti gubatuu fi boru galaanni Oromoo fudhatuudha, kana kan dubbate.
Yaadadhaa, Muddee 16 namichi kuni kanuma waadaa seene. Garuu, Oromoon oduu isaa hin dhageenne, qeerroon sodaachisaa isaa hin fudhanne. Haylamaaraam Dassaaleny afaan Woyyaaneen dubbata; Oromoon hundi kana qajeelatti hubata. Namichi ufii jilbiiffatee nu jilbiiffachiisuu barbaada. Dhugumatti, ammatti, waan qeerroon Oromoo isa dhagayu itti fakkaataa? Yoomumaan dubbiin Oromoo harka Woyyaaneetii bayuu hubata?
Ifatti nu goorra’uuf labsuun alatti labsiin amma kuni waan haarawa tokko uf keessaa hin qabu. Dhugaan jiru kana duras, mana manatti, ajjeefamaatumaa, akkasumas daandii irraa guuramaa hidhamaati kan turree. Wanti haarofni nuti kana dura hin arginee fi quba hin qabne tokkoon labsii fi sodaachisaa kana hordofee gadi bayu tokko hin jiraatu. Ajjeefamuun nuuf haarawaa miti. Ajjeefamuu fi hidhamutti xumura laatuuf kan qabsoofnu ta’uu bareechinee beekna, nuti.
Hanga yoomiitti murni Oromoo fi Oromiyatti silmii taate tuni akka uf sobdu beekuun nama rakkisa. Oromoon irratti finciluu qofaa miti salphinni isiin daakutti jirtu. OPDOn bakka hin jirtu. Kana booda iddoo durii sanitti, jibiiffattee siidaa Aksumii baadhattee, kan deebitu hin fakkaatu. Haylamaaraam fi gooftonni isaa kana beekuu hin dandeenne ykn hin feene. Hangamuu hadhooftu dhugaa liqimsutu isaaniif male; osoo xiqqoodhuma sammuu qabaatanii. Ammaatti dandiin isaan filatan qeerroo ajjeesuu, ololaan dhamaasuu fi qilleensa sodaa gadi itti lakkisuu. Sa’aa kantti, yeroo tabba bayuu geennetti, sodaachisaan duubatti nu deebisaa? Gaafii haqaa qabannee baane tasa nu gachisiisaa?
Abbootiin-irree osoma bookkistuu fi hin jirra jettu kan keessaan xiinxanaan nyaattamaa, alaan ammoo roobaa fi bubbeen rukutamaa kan kuftu. Waa’een Woyyaanees kana ta’uu isaa beekuudhaaf raagduu ta’uu nama hin feesisu. Oromoon dhibbaan-dhibbatti akka isaan hin feene osoo argan ni jirra jedhan. Amma kan itti jiran tattafii isii dhumaati: ijibbaata isii kan duuti jala geette godhu sani. Oduu heddummeessuun, akka Abbaay Tsahaayyee fi Geetaachoo Raddaa, haqqee nyaachutti kan nama geessu.
Hujiin qeerroo Oromoo diina dhiibuu fi hafuura dhabsiisuudha. Oromoon maal akka ta’e yeroon hundatti argisiisnu amma!
gabaasa human rights watch
gabaasa miidiyaalee addunyaa
Previous articleHuman Rights Watch fi miidiyaaleen addunyaa ajjeechaa Woyyaaneen Oromoo irratti raawwataa jirtu saaxilan
Next articleOPDOn Woyyaaneen Oromoo irratti woraana labsuu hubachuu fi qabsoo eegalame milkeessuuf waa gumaachuu qabdi